Home>Our Services>Projet Logistics>BBK
Break Contker Break, antsoina hoe boatin'ny BB (RANOM-PITIA FARANY NA FIDERANA MAMPISORATRA MOMBA NY BED) dia fomba fitaterana manokana eo anelanelan'ny OOG sy boaty be dia be.
Rehefa apetraka ao anaty vata tokana ny entana mavesatra sy mihenjana be raha toa ka voahilika ny fantsom-piainana na ny fisian'ny entana mivoaka ny fetran'ny haavon'ny tsangambato, ny lanjany mihoatra noho ny mavesatra ny boatin'ny OOG tokana, dia raiso ity fomba ity.
Ohatra, raha ny cargos dia mihoatra ny 4.5m matanjaka ary 11.8m ny halavany ary mihoatra ny lanjan'ny lanjan'ny OOG na boaty misy ny lanjany, amin'ny ankapobeny dia ny vidin'ny mihantona dia ho lafo be. Na izany aza, ny Sohologistra dia aleony mampiasa BBK, ka matetika dia mampiasa boaty misy takelaka maromaro mifangaro ao anaty "papne lehibe" ary ireo karazana super be mifatotra ity "palet".
Ny fomba fiasa BBK antsipiriany dia:
Alefaso aloha ny boaty fisaka tsy misy fotony. Manaraka, mandamina ny fandefasana aorian'ny fampandrenesana ny fanaraha-maso ny serivisy fitaterana ary alefa mivantana any amin'ny valan-jaza (akaikin'ny sambo). Ary rehefa avy eo ny boaty fitaterana entana rehetra eo amin'ny solaitrabe, dia manomboka misondrotra ireo vilia fisaka rehetra any anaty tabilao ary manamboatra ireo fitoeran-tsolika ireo ary mametraka ny entana mifohaza amin'ny fitoeran-tsofina lehibe. Ireo karazana cargos ireo matetika dia napetraka eo amin'ny sisiny farany ary tsy misy fanampiny fanampiny afaka manampy azy.
Dingana 1: Atsangano ny boaty fisaka tsy misy eny ambony eny ambony (max hatramin'ny 4 * 40'FR indray mandeha)
Dingana 2: Tonga tany an-tsokosoko ny cargos mahery ary niandry ny hikidinana
Dingana3: Mamindra entana mavesatra eny an-tsambo
Dingana 4: miomana amin'ny fatorana sy ny fanamafisana eny amin'ny sambo
Dingana 5: Fampisehoana antsipiriany fanamafisana
Inona no tombontsoa azo avy amin'ny BBK?
BBK dia tarihin'ny liners ao anaty boaty izay manarona ny ankamaroan'ny ranomasina manerantany. Ny fandaharam-potoana amin'ny sambo sy ny fotoana fanaterana dia somary raikitra ary somary ambany ny tahan'ny fahasimbana.
Inona no dikan'ny fitaterana BBK?
Ny BBK dia handray ny teny hoe hook-to-hook ，, izany hoe ny mpitatitra dia tompon'andraikitra amin'ny cargos mandritra ny vanim-potoana miainga mankany amin'ny famoahana. Raha ny fanazavana fanampiny dia manondro manokana ny vanim-potoana avy amin'ireo cargos hooking amin'ny cranes mankany amin'ny fanesorana ny fihantonana cranes. Ampiasaina ao amin'ny bb CARGO izany, izay midika fa ny tompon-tsambo dia tompon'antoka amin'ny fanonganana sy fanodikodinana ny sambo eny amin'ny seranan-tsambo ny fampidinana sy ny fampidinana entana any amin'ny seranana fitodian-toerana izay tsy anisany ny fandaniam-bola amin'ny alàlan'ny fitsangantsanganana sy ny fitahirizana.
Ahoana ny fomba fanadiovana mahazatra ho an'ny BBK?
Miankina amin'ny orinasam-pandefasana ihany. Ny ankamaroan'ny tompon'ny sambo dia mila manambara ny laharana fitaterana rehetra ho an'ny fanadiovana ny fomba amam-panao.
Ahoana ny fomba handaminana ny BBK anatiny?
Voalohany, ny fiarabe fitaterana dia mandrafitra drafitra anatiny. Manaraka, mandamina ny fandefasana aorian'ny fampandrenesana ny fanaraha-maso ny terminal entana ary avy eo alefa mivantana ny cargos sy ny boaty fisaka tsy misy ilana azy any amin'ny crane wharf (akaikin'ny sambo). Ary rehefa vita ny boaty ankapobeny misy entana ao amin'ny solaitrabe, dia manomboka misondrotra ireo vilia manidina tsy misy afa-tsy eo amin'ny solaitrabe.